यस्ता छन् अण्डा खानुकाे ९ फाइदा – Himalaya TV
Home » समाचार » यस्ता छन् अण्डा खानुकाे ९ फाइदा
४ माघ २०७४, बिहीबार ११:१२
के तपाइँलार्इ थाहा छ दिनमा कतिवटा अण्डा खानु स्वास्थ्यकाे लागि उत्तम हुन्छ? हालसालै गरिएकाे एउटा अनुसन्धानले के प्रमाणित गरेकाे छ भने दैनिक २ वा ३ अण्डा खानु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । यसमा पाइने खास किसिमका तत्व र गुणहरूले गर्दा अण्डाले हामीलार्इ विभिन्न किसिमका फाइदा दिन्छ । दिनहुँ अण्डा सेवन गर्नु राम्राे हुन्छ भनेर त धेरैलार्इ थाहा हुन्छ नै, तर कतिवटा खाने र यसकाे महत्व के-कति छ भनेर सबैलार्इ जानकारी नहुन सक्छ ।
याे पाेष्ट पढेपछि मानव स्वास्थ्यमा कुखुराकाे अण्डाकाे के महत्व छ र कति खाँदा सबैभन्दा उत्तम हुन्छ भनेर बुझ्नुहुनेछ ।
काेलिनले मस्तिष्कलार्इ बचाउँछ ।
मस्तिष्कका काेषहरूकाे सामान्य संचार फस्फाेलिपिड्सले निर्धारण गर्दछ जसमा काेलिन निहित हुनछ । याे भिटामिन हाम्राे मस्तिष्क निर्माणमा नभर्इ नहुने चिज हाे भनेर प्रयाेगशाला परीक्षणबाटै प्रमाणित भइसकेकाे छ । काेलिनकाे अभावमा स्मरणशक्ति घट्न जान्छ । एक दिनमा २ वटा अण्डाकाे सेवनले उक्त भिटामिनकाे अावश्यकता पूर्ति गर्दछ ।
ल्युटिनले अाँखालार्इ तेजिलाे बनाउँछ
नयाँ अनुसन्धानले बताएअनुसार अण्डामा पाइने ल्युटिन नामक तत्वले रतन्धाेकाे समस्या घटाउनुकाे साथै दृष्टि कमजाेर हुनबाट जाेगाउँछ ।
भिटामिन डी काे मद्दतले क्याल्सियम ग्रहण गर्न मद्दत गर्छ
हामीलार्इ अावश्यक पर्ने भिटामिन डी काे मात्रा पूरा गर्न कि त एक चम्चा माछाकाे तेल वा एउटा उसिनेकाे अण्डा सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवैमा उत्तिकै मात्रामा भिटामिन डी पाइने भएतापनि निश्चित रूपमा बहुसंख्यक मानिसहरू दाेस्राे विकल्प राेज्छन् । याे भिटामिनले शरीरमा क्याल्सियम ग्रहण गर्न भरपूर मद्दत गर्दछ जसले दाँत र हाडहरू बलियाे बनाउँछ ।
भिटामिन बी कम्प्लेक्सले छाला, कपाल र कलेजाेलार्इ स्वस्थ बनाउँछ ।
हाम्राे कपाल र छालालार्इ मुख्यतया भिटामिन बी१२, बायाेटिन र पाचनयाेग्य पाेषिलाे प्राेटिनले बलियाे बनाउँछ । त्यस्तै, अण्डामा पाइने फस्फाेलिपिड्सकाे सहायताले हाम्राे लिभरमा जम्मा हुने विषजन्य पदार्थलार्इ हटाउँछ ।
मुटुराेगकाे खतरालार्इ न्यूनिकरण गर्दछ
हालै गरिएकाे रिसर्चले शरीरमा हुने कोलेस्टेराेल वृद्धिमा अण्डाकाे कुनै हात नहुने प्रमाणित गरेकाे छ । बरु यसमा पाइने फस्फटाइड्सले काेलेस्टेराेल लेभल सन्तुलित गर्न सहयाेग गर्दछ । अझ यसले शरीरमा काेलेस्टेराेल उत्पादन राेक्दछ । अण्डामा अाेमेगा३ एसिड पनि पाइन्छ जसले ट्राइग्लिसराइडकाे मात्रा घटाउन मद्दत गर्दछ । परिणामस्वरूप मुटुसम्बन्धी विभिन्न राेगकाे खतरा कम गराउँछ ।
ताैल घटाउन सहयाेग गर्छ
के तपाइँलार्इ थाहा छ विहान खाजामा अण्डासहितकाे कम क्यालाेरीयुक्त खानेकुराले दुर्इ गुणा छिटो ताैल घटाउन मद्दत गर्छ भनेर? अचम्म लाग्न सक्छ, तर सही हाे । यस्ता खानेकुराले शरीरलार्इ अावश्यक पर्ने पाेषण तत्वकाे पूर्ति गर्छ र दिउँसाे खाने खानाकाे मात्रा पनि घटाउँछ ।
क्यान्सरकाे खतरा घटाउँछ
स्वस्थ दिमागकाे विकास गर्ने मात्र नभर्इ काेलिनले क्यान्सरकाे संभावित जाेखिमलार्इ पनि कम गराउँछ । किशाेरावस्थामा दिनहुँ अण्डा सेवन गर्ने महिलाकाे ब्रेस्ट क्यान्सरकाे खतरा १८ प्रतिशतले घट्ने पनि याे अनुसन्धानले देखाएकाे छ ।
प्रजनन् क्षमता बढाउँछ ।
भिटामिन बी सेक्स हर्माेन निर्माण गर्ने निर्धारक तत्वहरूमध्ये एक हाे । एउटा महिला गर्भवती हुन अावश्यक पर्ने भिटामिन हाे भिटामिन बी९। यसले राताे रक्त काेषहरू निर्माण गर्न तथा भ्रूणकाे स्नायुनली तयार गर्न सहयाेग गर्दछ । साथै इन्फेक्सन हुनबाट राेकी बच्चालार्इ सुस्त मनस्थिति हुनबाट बचाउँछ । एउटा अण्डामा ७ मिलिग्राम भिटामिन बी पाइन्छ ।
छिटै बुढ्याैली लाग्नबाट राेक्छ ।
डच वैज्ञानिकहरूले गरेकाे एउटा अनुसन्धान अनुसार हरेक दिन २ वटा अण्डा सेवन गर्ने ३५ देखि ४० उमेर समूहका ८७ प्रतिशत महिलाहरूमा उमेरका कारण देखिएका धब्बाहरू हराउनुकाे साथै छालाकाे चाउरीपन हटेर गएकाे पाइयाे भने पुरुषहरूमा उनीहरूकाे अाँखाकाे चाउरी कम हुँदै गएकाे देखियाे ।